के चुनावले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ? « LiveMandu
के चुनावले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ?
११ पुष २०७७, शनिबार १६:५९
नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अहिले मूलरूपमा चारजना व्यक्ति माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपीशर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको क्रियाकलापवरिपरि घुमिरहेको छ। प्रत्यक्षरूपमा कार्य गरिरहेका र बाहिरबाट देख्न सकिने यी चार कर्ता (Actors) हरूको क्रियाकलापले गर्दा नै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ–नयाँ, उदेकलाग्दा र अपूर्व दृश्यहरू देखिएका छन्।
Economic Impact of the Election Amidst the Covid 19 Crisis-Article
नेपालमा केपी ओलीको कार्यकालमा बढ्दै गएको नेपालको राजनीतिमा चीनको भूमिका भारतलाई पटक्कै मन परेको थिएन, छैन। यो कारणले गर्दा भारत ओलीको सरकार पतन गराउन र त्यस ठाउँमा आफ्नो पक्षधर कर्ता (माधव नेपाल वा पुष्पकमल दाहाल) लाई ल्याउन प्रारम्भदेखि, ओली सरकार गठन भएदेखि, सक्रिय थियो र अहिले पनि छ। यस कारण यसरी अदृश्य कर्ताहरूले पनि नेपालको राजनीतिलाई कमजोर तुल्याउनमा विशेष भूमिका खेलेका छन्। विशेषगरी भारत, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति कमजोर रहोस्, जसले गर्दा कमजोर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिबाट आफ्नो देशको हितमा काम गराउन ज्यादै सजिलो हुन्छ भन्ने वैदेशिक नीतिमा विश्वास गर्छ र सोही अनुसार उसले नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर पार्छ। अस्थिर पार्न नयाँ–नयाँ रणनीति पनि निर्माण गर्छ। नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर पार्न भारतले दृश्य (नेपाल, खनाल, दाहाल, ओली, देउवा आदि) कर्ताहरू एवं उनीहरूको स्वार्थलाई प्रयोग गर्छ। अर्कोतिर यी दृश्य कर्ताहरू पद र शक्तिमा रहन पाउने लोभमा भारतको हितमा काम गर्न सदा तत्पर रहन्छन्। भारतद्वारा स्वेच्छाले उपयोग हुन्छन्। यसरी यी कर्ताहरू नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर पार्नमा अदृश्य कर्ताहरूभन्दा बढी दोषी छन्। यस किसिमका कर्ता (नेता) हरूबाट छुटकारा पाउन उनीहरूको स्थानमा देशको हितमा काम गर्ने नयाँ–नयाँ व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा ल्याउन आवश्यक छ। र केवल निर्वाचनद्वारा मात्र यी पुराना नेताहरूलाई विस्थापित गरेर नयाँ नेताहरूको उदय गराउन सकिन्छ। यो कारणले गर्दा पनि तत्काल निर्वाचन हुन आवश्यक देखिन्छ र हुनु उपयुक्त हुन्छ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपनि देशको राजनीतिले स्थिरता पाउने अपेक्षा गर्न सकिंदैन किनभने राजनीतिक नेतृत्व पुनः यही पुराना नेताहरूको पकडमा रहनेछ। यस्तो स्थितिमा जब बहुमत प्राप्त गरेको दलले सरकार चलाउन सकेन भने मिलिजुली सरकार बनेमा त्यो सरकारले झन् के राजनीतिक स्थिरता दिन सक्ला? जब एउटै दलभित्र, एउटा नेताले अर्को नेतामाथि प्रम पद प्राप्त गर्न अन्तर्घात गर्छ भने मिलिजुली सरकार बनेमा एउटा दलको नेताले अर्को दलको नेतामाथि अन्तर्घात गरेर सरकार पतन नगराउला भन्न सकिंदैन। अर्कोतिर नेकपा आफ्नै दलभित्रको डरलाग्दो द्वन्द्वमा फसेकोले उसले एक्लैले स्थिर सरकार दिने सम्भावना टाढा–टाढासम्म पनि देखिंदैन।
नेपालको सन्दर्भमा यो चुनाव (यदि भएमा) ले इमानदार र राष्ट्रवादी नेता छानेर ल्याएमा चुनावी खर्चलाई सकारात्मकरूपमैं लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चुनावी खर्च ऋण नै गरेर गरिएको भए तापनि त्यो चुनावी खर्चले इमानदार नेताहरू ल्याउनेछ। ती इमानदार नेताहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु–याउनेछन्। यी पुराना नेताहरू जस्तो झगडा, दाउपेंच, घात, अन्तर्घातमा राष्ट्रनिर्माण गर्ने समय खेर फाल्नेछैनन्।